5 Jimicsiyada Wanaagsan ee Loogu talagalay Garabka Nabraha | Vondt.net
5 jimicsi fiican oo loogu talagalay garbaha xanuunka
01 / 04 / 2016 /0 Comments/i tayada Articles, tababarka/av waxyeelladayda
Miyaad la dhibtoonaysaa garbaha xanuun? Halkan waxaa ah 5 layliyo fiican oo sababi kara xannuun yari, dhaqdhaqaaq badan iyo shaqo wanaag! Maanta ka bilow
Garabka xanuunku wuxuu yeelan karaa sababo dhowr ah, sida arthrosis, jahwareer, murqo xumo iyo wixii la mid ah. Waxyaabaha layaabka leh ee xanuunka noocaas ah ayaa ah inay naga baqeyso inaan sameyno wixii aan runtii sameyn lahayn, taas oo ah, jimicsi. Isticmaal la’aan iyo jimicsi la’aan ayaa horseedda deggenaansho yar iyo shaqo xumo - taas oo iyaduna keenta xanuun badan.
Qodobkaan, waxaan diirada ku saarnay - noocee laakiin waxtar leh - jimicsi xoog ah oo garbaha ah oo markii horeba xanuun yar lahaa. Laakiin maskaxda ku hay in haddii aad leedahay garasho garasho oo jirta, markaa way ku caawin kartaa inaad la tashato takhtarkaaga ka hor intaadan isku dayin jimicsiyadan. Eeg barnaamijyo jimicsi oo dheeri ah iyada oo loo maro kanaalkayaga YouTube (daaqad cusub).
- 5 jimicsi oo loogu talagalay xasilloonida iyo shaqada ka wanaagsan
Layliyada soo socdaa waxay daboolayaan dhaqdhaqaaqa iyo xoojinta dhammaan muruqyada wareega (muruqyada xasilloonida garabka) iyo sidoo kale xoogaa muruqyada jirka ah. Marka jimicsigaan ma heli doontid oo keliya garabkaaga sifiican, laakiin sidoo kale hagaajinta xaalladda - laba jibaar halkaas.
1. Kor u qaad
Dhex geli badhtamaha middihiisa cagahaaga hoostooda. Ku istaag gacmahaaga dhinacaaga oo gacanta ku qabo gacan kasta. Gacmahaaga u jeedi Gacmaha kor ugu qaad dhinaca iyo kor ilaa ay siman yihiin.
Layli muhiim ah oo loogu talagalay xakameynta hagaagsan ee dhaqdhaqaaqa garbaha iyo garbaha. Waxa kale oo ay xoojisaa supraspinatus (murqaha Rotator cuff) iyo dhadhanka.
2. Kor u qaadista hore
Ku dhaji bartamaha laastikada cagaha hoostooda. Istaag adigoo gacmahaaga dhinacyadaada ku hayaan oo gacan kasta ku heysto. Baabacooyinkaaga gadaal u jeedi. Gacmahaaga hore iyo kor ugu qaad ilaa ay ka hooseeyaan dhererka wejiga. Jimicsi wanaagsan oo loogu talagalay dhaqaajinta trapezius-ka hoose iyo muruqyada wareega.
3. Wadista istaadhista
Ku dheji laastikada derbiga feeraha. Ku istaag lugaha fidsan, gacanta ku haya gacan kasta iyo weji derbiga feeraha. Gacmahaaga toos uga fogee jidhkaaga oo gacanta u jiid calooshaada. Waa inaad ogaataa in garbaha garbaha ay midba midka kale u jiidayaan.
Layligani aad ayuu u fiican yahay marka la eego dhaqaajinta muruqyada ka dhex jira garbaha garbaha iyo hareeraha garbaha. Oo ay ku jiraan Rotator cuff, rhomboidus iyo muruqyada serratus.
4. Istaag garabka taagan - wareejin gudaha: Ku dheji laastikada dhererka xudunta. Istaag gacanta ku laastikada hal gacan iyo dhinaca dhinaca derbiga feeraha. Ku hay qiyaastii 90 digrii xagal xusulka oo u oggolow gacanta hore inay ka soo bax jirka. Ku wareeji garabka si wadajirka ah ugu fidsan ilaa ay caloosha u dhow caloosha Xusulku si adag ayuu jirka u qabtaa inta jimicsigu socdo.
Layli muhiim ah oo badanaa la iloobo goorta dadku aysan aad u fahmin muruqyada ay tababbarayaan (iyo sababta ay ugu baahan yihiin inay ka shaqeeyaan xasilinta garabka jilicsan) - markaa si sahlan bay u fududahay in la sameeyo jajabka oo loo arko binipska oo sii weynaanaya iyo ka jilicsan? Way fududaan kartaa, laakiin dadku waxay hilmaamaan in biceps iyo triceps ay ku tiirsan yihiin garbaha adag sidii madalkooda. Awood la'aan muruqyada wareegga culeyska, waxay si aad ah u adkaan doontaa in la dhiso muruqyo waaweyn oo ku yaal biceps iyo triceps - gaar ahaan iyada oo aan la dhaawaceynin shaqadooda awgeed ama culeys saaid ah.
5. Istaag garabka taagan - wareejin dibedda: Ku dhaji laastikada dhererka xudunta. Istaag laastikada oo hal gacan ah dhinacna dhinac kaga taaga darbiga feeraha. Ku qabo xagasha qiyaastii 90 darajo xusulka oo u oggolow dhudhunka inuu ka tilmaamo jirka. U rog rog dibedda dhinaca garabka inta aad kari karto. Xusulka waxaa lagu hayaa meel u dhow jirka inta lagu jiro jimicsiga. Ha ka boodin tan. Waxay noqon kartaa layliga xaqiijinaya inaadan garabkaaga dhaawicin haddii ay dhacdo dhicitaan, jerk iyo wixii la mid ah.
- Waa inaadan u sameyn jimicsiyadaan garabka xanuun
Layliyo ku dhigaya garabka inay wadajiraan meel jilicsan waa in laga fogaadaa - mid ka mid ah jimicsiyada ugu caansan ee ay dadka badankood ku dhaawacmaan waa gesha. Layligani waa hagaag haddii aad xasillooni aad u wanaagsan ku leedahay murqaha garabka oo aad leedahay kaliya fulinta saxda ah - wax inteena badan aan haysan. Layligani wuxuu u dirayaa garbaha hore meel jilicsan ka dibna mid ayaa qaadi doona culeyska jirkiisa 'iyada oo loo marayo' isku-dhafka walwalsan ee walwalka - iskudhiska dhaawacyada nabarrada aagga. Waa inaad garbahaaga xasilloon aad u fiican ka hor intaadan sameynin layligan, raac “ha socon illaa aad soconaysid” mabda'a si looga fogaado dhaawacyada la xiriira jimicsiga. Saxaafadda culeyska culeyska sareeya sidoo kale waa in laga fogaadaa haddii aad la dhibtooneyso garabka xanuun.
Sidoo kale aqri: - 4-ta jimicsi ee ugu xun ee garbahaaga!
Faa'iidooyinka jimicsiga dharka labiska loo isticmaalo?
Si aad u qabato shantaas jimicsi waxaad u baahan doontaa tababar laastikada, mid waxaad ka iibsan kartaa dukaamada isboortiga - waxaan kugula talineynaa inaad mid u isticmaasho gacan bir ah. Sababta aan ugu adeegsanay layliga layligan waa in tani ay u horseedi doonto iska caabbinta jimicsiga inuu ka imaado jihada saxda ah - tusaale ahaan, jimicsiga wareegga-badan wuxuu noqon doonaa mid aan faaido lahayn haddii aad gacanta ku hayso buugga miisaan halkii aad ka yeeli lahayd middi (ama aaladda jiidista), sida culeyska culeyska u leeyahay Hubso in xooggu dhulka ku socdo (jihada qaldan) - markaa waxaad tababari doontaa oo keliya boogtaada (oo aadan ahayn infraspinatus aad runtii rabto inaad xoojiso). Waxaan rabnaa in awooda si toos ah uga timaado dhanka dhinaca, kama imaano dhanka kore. Eeg? Tani waa mid ka mid khaladaadka ugu caansan ee aan ku aragno jir-dhiska iyo wixii la mid ah.
Tirada ku celcelinta iyo xirmooyinka?
Dhamaan jimicsiyada waa la sameeyaa 3 set x 10-12 celcelis. 3-4 jeer usbuucii (4-5 jeer haddii aad awoodid). Haddii aadan helin inta ugu badan, waxaad kaliya qaadan kartaa inta aad qaadan karto.
Mawduuca laxiriira: - Xanuun garabka? Waa inaad tan ogaataa!
Maxaan sameyn karaa xiitaa xanuun garabka ah?
Alaabada lagu taliyay ee xanuunka joojinta garabka
PAGE xiga: Cadaadiska mawjadaha cadaadiska - wax ma u tahay garabkaaga xanuun?
Guji masawirka kore si aad ugu dhaqaaqdo bogga ku xiga.
Tags: layliyo, garbaha dhaawacan, garbaha ka dhaawacmay
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/5-gode-ovelser-for-vonde-skuldre-med-tekst-final-2.jpg?media=1648573622 507 700 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-04-01 18:32:522018-04-07 10:04:485 jimicsi fiican oo loogu talagalay garbaha xanuunka
Laga yaabee inaad sidoo kale jeceshahay kuwan
Daaweynta xanuunka 'carpal tunnel syndrome' - layliyo fudud iyo talooyin.
6 jimicsi xoog wax ku ool ah oo loogu talagalay jilbaha xanuunka
- Ma laga maqlay datanakke aka iPosture?
Madax xanuunka noocee ah ayaad qabtaa? Cudurka Crohn